Electrosurgical units (ESU) is an electrosurgical instrument that use high-frequency electrical current to cut tissue and control bleeding by causing coagulation. It heats the tissue when the high-frequency high-voltage current generated by the effective electrode tip in contact with the body, an...
According to the function classification, there are three types of bedside monitors, central monitors, and outpatient monitors. They are divided into intelligent and non-intelligent. (1) Bedside monitor: It is an instrument that is connected to the patient at the bedside. It can continuously dete...
1. What is an ultrasonic probe The probe used in ultrasonic testing isatransducer that uses the piezoelectric effect of the material to realize the conversion of electrical energy and sound energy. The key component in the probe is the wafer, which isasingle crystal or polycrystalline sheet w...
sphygmomanometer ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ ၁။ Electronic sphygmomanometer ၁) အခန်းကိုတိတ်ဆိတ်အောင်ထားပါ၊ အခန်းအပူချိန်ကို ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မှာထားသင့်ပါတယ်။ ၂) တိုင်းတာမှုမပြုမီ၊ ဘာသာရပ်အားဖြေလျှော့သင့်သည်။ မိနစ် ၂၀-၃၀ လောက်အနားယူတာအကောင်းဆုံးကဆီးအိမ်ကိုစွန့်ပါ၊ အရက်၊ ကော်ဖီဒါမှမဟုတ်အရက်မသောက်တာအကောင်းဆုံးပါ။
သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းကိရိယာ၏လုပ်ဆောင်ချက်လက္ခဏာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ECG ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း - သွေးဖိအားတိုင်းခြင်း/ECG နှစ်ခုစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုပြုလုပ်သောအခါတိုင်းစက္ကန့် ၂၀ အထိမှတ်တမ်းတင်ပါ။ သွေးခုန်နှုန်းလှိုင်း - သွေးဖိအားတိုင်းတာပုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ပြန်သုံးနိုင်သောအရွယ်ရောက်ဆီလီကွန်ပျော့ပျောင်းသော SpO2 အာရုံခံကိရိယာ
ချစ်ခင်ရပါသောစားသုံးသူ။ ခက်ခဲသော COVID ကာလအတွင်းသင်၏စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးတွဲပါကအနည်းဆုံး ၅၀% သက်သာစေရန် Spo2, ECG, NIBP, IBP, TEMP, ESU အတွက်ဤမြှင့်တင်ရေးစာရင်းကိုမျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် GE, Philips, Nellcor, Mindray နှင့်လိုက်ဖက်သော Medke "H ကိုလည်းဖြစ်ကြသည်
၁။ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်နိယာမအနီရောင်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းဒေသများရှိ oxyhemoglobin (HbO2) နှင့်လျော့နည်းသောဟေမိုဂလိုဘင် (Hb) ၏ရောင်စဉ်တန်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများအရအလင်းနီဒေသရှိ HbO2 နှင့် Hb စုပ်ယူမှုကိုတွေ့နိုင်သည် (600-700nm) ) အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်, နှင့်အလင်းစုပ်ယူတစ်ခု ...
Electrocardiogram monitor သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ်ဖြစ်စေ၊ အထွေထွေရပ်ကွက်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ECG မော်နီတာ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည်လူနာမှထုတ်ပေးသော ECG အချက်ပြကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။
၁။ ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်မှပြတ်တောက်သောအချက်ပြမှု ၁) ပါဝါနှိုးစက်ပါဝါကြိုးကြိုး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုသို့မဟုတ်ဘက်ထရီပြတ်တောက်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပါဝါသတိပေးချက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မော်နီတာများတွင်ကိုယ်ပိုင်ဘက်ထရီများရှိသည်။ အကယ်၍ ဘက်ထရီကိုကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးပါကအားမသွင်းလျှင်၎င်းသည်ဘက်ထရီနိမ့်သည့်အချက်ပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၂။ ECG နှင့် respirat ...
၁။ ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်တိုင်မှတ် - တစ်ခုတည်းသောကြည်လင်သော longitudinal လှိုင်းဖြောင့်စောင်းကျောက်ကပ်နှစ်ထပ်ကျောက်လုံးလွန်း longitudinal လှိုင်းဖြောင့်စင်း ၂။ Oblique စုံစမ်းမှု - တစ်ခုတည်းကြည်လင်သောညှပ်လှိုင်းလှိုင်း Oblique Probe a1 <aL <aⅡ၊ နှစ်ဆကြည်လင်သောညှပ်လှိုင်းများ Oblique စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ အသေးစားအတွက် ...